कोरोना संक्रमणबाट थप १३ जनाको मृत्यु (को कहाँका ?) - Janadesh Khabar
कोरोना संक्रमणबाट थप १३ जनाको मृत्यु (को कहाँका ?)
जनादेश खबर	काठमाडौं	असोज ५, २०७७
पछिल्लो १४ घण्टामा कोरोना भाइरस कोभिड १९ को संक्रमणबाट थप १३ जनाको मृत्यु भएको छ ।
काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर २/२ तथा दोलखा, ताप्लेजुङ, सुनसरी, झापा, रुपन्देही, सुर्खेत र सप्तरीका एकएक जनाको मृत्यु भएको हो ।
को कहाँका ?
कलंकी, काठमाडौंका ५८ वर्षीय पुरुषको आइतबार बी एण्ड बी अस्पतालमा मृत्यु भएको छ । भदौ २५ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका उनी मुटु र श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या लिएर ३० गते अस्पताल भर्ना भएका थिए ।
सानोगौचरण, काठमाडौंका ७३ वर्षीय पुरुषको सोमबार हृयाम्स अस्पतालमा मृत्यु भएको छ ।
२५ भदौमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि होम आइसोलेसनमा रहेका उनलाई श्वासप्रश्वासमा समस्या भएपछि ३० गते अस्पताल पुगेका थिए । उनी उच्च रक्तचापको समस्याबाट समेत पीडित थिए ।
मध्यपुर थिमी, भक्तपुरका ८४ वर्षीय पुरुषको पाटन अस्पतालमा शनिबार मृत्यु भएको छ । श्वासप्रश्वासमा समस्या भएर भदौ ३० गते अस्पताल भर्ना भएका उनलाई ३१ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
इतछें, भक्तपुरका ६२ वर्षीय पुरुषको आइतबार काठमाडौं मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको छ । असोज १ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका उनी क्षयरोग र कजेलोको समस्याबाट पीडित थिए ।
सातदोबाटो, ललितपुरकी ५८ वर्षीया महिलाको आइतबार अल्का अस्पतालमा मृत्यु भएको छ । ज्वरो, श्वासप्रश्वासमा समस्या र निमोनिया भएर ३ गते अस्पताल भर्ना भएकी उनलाई आइतबार नै कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
एकान्तकुना, ललितपुरका ६१ वर्षीय पुरुषको आइतबार त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा मृत्यु भएको छ । १ असोजमा अस्पताल भर्ना भएका उनलाई २ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
दोलखाकी ५२ वर्षीया महिलाको सोमबार पाटन अस्पतालमा मृत्यु भएको छ । उच्च रक्तचापबाट पीडित उनी सेरेब्रोभास्कुलर अक्सिडेन्ट भएर असोज ३ गते अस्पताल भर्ना भएकी थिइन् र ४ गते कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको थियो ।
ताप्लेजुङकी ३७ वर्षीया महिलाको सोमबार विराट मेडिकल कलेज, मोरङमा मृत्यु भएको छ । कलेजोसम्बन्धी समस्याबाट पीडित उनलाई ३० भदौमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि विराट मेडिकल कलेजको आइसोलेसनमा भर्ना गरिएको थियो ।
इनरुवा ४, सुनसरीकी ४९ वर्षीया महिलाको वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा मृत्यु भएको छ । नियमित डायलासिस गराउँदै आएकी उनी ३० भदौमा अस्पताल भर्ना भएकी थिइन् भने १ असोजमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
मेचीनगर ८, झापाकी ७२ वर्षीया महिला वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा मृत्यु भएको छ । श्वासप्रश्वासमा समस्या हुनुका साथै निमोनियाको लक्षण देखिएपछि कन्काई अस्पतालले आइतबार धरान रिफर गरेको थियो ।
देवदह नगरपालिका ९, रुपन्देहीका ६९ वर्षीय पुरुषको सोमबार ग्राण्डी अस्पताल, काठमाडौंमा मृत्यु भएको छ । भदौ २२ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका उनी स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि २९ गते कोरोना अस्पताल, बुटवलमा भर्ना भएका थिए । स्वास्थ्यमा थप समस्या आएपछि २ असोजमा ग्राण्डी भर्ना गरिएको थियो ।
गुर्भाकोट नगरपालिका ४, सुर्खेतका ५८ बर्षीय पुरुषको भेरी अस्पताल, बाँकेमा सोमबार मृत्यु भएको छ ।
सुर्खेत कारागारमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय भोगिरहेका उनलाई दम र श्वास प्रश्वासको समस्या थियो र प्रदेश अस्पताल, सुर्खेतले थप उपचारका लागि नेपालगञ्ज पठाएको थियो । भदौ २१ गते अस्पताल भर्ना भएका उनलाई २२ गते कोरोना पुष्टि भएको थियो ।
बिष्णुपुर गाउँपालिका १, सप्तरीका ५५ वर्षीय पुरुषको वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा मृत्यु भएको छ । ज्वरो आउनुका साथै श्वासप्रश्वासमा समस्या भएपछि उनलाई एक साताअघि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा ११५४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । देशभरका प्रयोगशालामा ९ हजार ५३३ नमुना परीक्षण गर्दा ४१८ महिला, ७३६ पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
उनीहरुमध्ये ४२७ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४७ हजार २३८ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा मात्र १००५ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।
५ असोज २०७७, सोमवार २०:३५ बजे प्रकाशित